Tag: Buula | Sagal Radio Services
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo la wareegay deegaano ku dhow dhow Buulo Burde
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa la sheegay inay la wareegeen deegaano ku dhow dhow degmada Buulo Burde oo la filayo in dhowaan xarun u noqoto Maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
WAR DEG DEG AH.Ciidanka Maamulka Jubba iyo AMISOM oo la wareegay deegaanka Buulo-Guduud
Ciidamada maamulka Jubba iyo kuwa AMISOM oo saaka howlgalladii ugu horreeyay oo qayb ka ah howlgallada ka socda gobollada dalka ka billlaabay gobollada Jubbooyinka ayaa kula wareegay Buulo-guduud oo 30-km Waqooyi kaga beegan degmada Kismayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
War Deg Deg Ah Ciidamada Huwanta oo Daqiiqado yar kahor galay Buula Mareer iyo Dagaal Culus oo Wali socda
Dibad bax ay dhigayeen Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya iyo dad Shacab ah oo maanta ka dhacay Degmada Buulo Burte
Waxaa maanta Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan ka dhacay Dibad bax aad u balaaran ay dhigayeen shacabka ku dhaqan Degmadaasi iyo Ciidamo katirsan Milatariga Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dagaal Culus oo ka dhacay Degmada Buulo Burde iyo Meydad badan oo saakay lagu arkay Degmadaasi
Wararka ka imaanaya Degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Xalay Saqdii Dhaxe dagaal culus oo u dhaxeeyay Dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM uu halkaasi ka dhacay.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobey oo tagay degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan
Wafdi ka socda Hey'adaha Qaramada Midoobey ayaa shalay tagay degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab, iyadoo degmada ay ka jirto qiimo koror ku yimid maciishada.
Al-Shabaab oo maleeshiyaad looga dilay xalay Duleedka Dagmada Buulo-burte
Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay iska caabbiyeen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab xalay ku soo qaadday saldhig ay ciidamada ku leeyihiin galbeedka degmadaas.